Iliso lakho kwiiMakethe.
Fumana umda wakho wokurhweba.
Joyina FOREX LENS
Bukela, Funda, kwaye INGXELO kunye
kunye noluntu lwethu lokurhweba ngaphakathi
Ubulungu bePro Trader
Joyina igumbi lethu lokurhweba le-Forex elingenakuthelekiswa nanto
apho sisasaza khona LIVE yonke imihla
ukukubonelela ngohlalutyo lwemarike ephilayo
kunye nemibono yorhwebo ngexesha leNew York
& kunye/okanye iiseshoni zaseLondon.
YIBA UMHWEBI WEPRO
IIMBONO ZONYAKA ZONYAKA
Fumana BHALA ukufikelela kwi abahlalutyi bezobugcisa abanamava yeQ & A, impendulo kwi
Iimbono zorhwebo, kwaye ikunike iiseti zorhwebo ezinengeniso
kwi-Forex, iMpahla, ii-Indies kunye neemarike ze-Crypto.
Fumana iMibono yoRhwebo!
Fumana ukufikelela kwithala leencwadi lezemfundo leeyure ezingama-400+ zeevidiyo.
Sifundisa izicwangciso zokurhweba ezomeleleyo ukunika abarhwebi i-REAL EDGE ekurhwebeni kwabo.
Amaxabiso obulungu bePro
Ngaba uyafuna ukufunda iiMfihlo zeMali eSmart?
At Forex Lens, asikuthengisi amaphupha nezithembiso, siyakuthengisa IINKCUKACHA. Forex Lens yinkonzo yokurhweba ye-Forex yeZiko eyakhiwe ngabarhwebi kubarhwebi. Abarhwebi abafana nathi abahlalutya iitshathi ukuze baphile bafuna inkonzo ethembekileyo efana Forex Lens ukwandisa iinkqubo zabo zokuthatha izigqibo. (Yeyiphi ingcamango yorhwebo omele uyithathe, ingakanani inkunzi ebeka emngciphekweni, indlela yokulawula urhwebo, ukuphuma nini kurhwebo, njl.njl.)
I-CEO ephezulu efana noJeff Bezos ilindele kuphela ukwenza izigqibo ezi-3 ezilungileyo ngosuku. Ke abarhwebi bemini njengathi banokusebenza njani kwinqanaba eliphezulu? Forex Lens sisisombululo kubarhwebi imini imali smart ehlabathini lonke. Forex Lens kuya kukunceda wenze ezona zigqibo zorhwebo zilungileyo yonke imihla. Senzela wena isiseko kwaye konke okufuneka ukwenze kukuphumeza.
Joyina iseva yethu yeDiscord apha
Indawo yoRhwebo yoNene
Nguwe ozingqonge naye. Joyina uluntu lwabarhwebi abasebenzayo kwaye ufunde kwiingcali ezinamava. Thatha izakhono zakho uye kwinqanaba elilandelayo ngokulandela iividiyo zethu zemihla ngemihla zohlalutyo lobugcisa.
Imijelo yoBomi bemihla ngemihla & Uhlalutyo Market
Iividiyo ezintsha yonke imihla zikubonelela ngohlalutyo lwexesha lokwenyani lwentengiso kwi-Forex, iiMpahla, ii-Indices kunye neemarike ze-Crypto. Cela uhlalutyo lwetshathi yayo nayiphi na i-asethi kwaye ufumane impendulo kwiingcali zethu.
Iingcamango zoRhwebo eziNcedo & Ukuseta
Abahlalutyi bethu bobuchwephesha bakubonelela ngeembono zokurhweba ezinokwenzeka eziphezulu usebenzisa i-Smart Money, kunye nokubonelela kunye nokuBanga iindlela zokurhweba. Oku kuya kukunceda ngecala lomkhombandlela, amangeno kunye nokuphuma, kunye nolawulo lomngcipheko.
Inyathelo lexabiso lihamba kakhulu ngolwesiHlanu emva kwemini, kwaye liqhelekile…
Matshi 4, 2022/by Forex Lens iindaba
Ukuseta urhwebo kuxoxiwe ngalo kwiseshini yanamhlanje ephilayo kangangezihlandlo ezininzi…
Matshi 3, 2022/by Forex Lens iindaba
Ukuthatha inzuzo! Yeyiphi indlela entle yokuqalisa olunye usuku lokurhweba.…
Matshi 2, 2022/by Forex Lens iindaba
Iingxoxo zohlaziyo lwemakethi ekhoyo ngale ntsasa zigubungele indlela iimarike…
Matshi 1, 2022/by Forex Lens iindaba
Ungeniso lwezorhwebo olulolona luhlaziyiweyo kwinani lemali enkulu…
Februwari 28, 2022/by Forex Lens iindaba
Uhlalutyo lwe-Bitcoin lutshintshile ukususela izolo. Iimarike zalile…
Februwari 25, 2022/by Forex Lens iindaba
IRussia ihlasela iUkraine, kwaye sayigubungela imiphumo ye-ripple…
Februwari 24, 2022/by Forex Lens iindaba
Amathuba okuseta urhwebo aye ajongwa ngexesha lanamhlanje...
Februwari 23, 2022/by Forex Lens iindaba
Inzuzo ye-Altcoin iyaqhubeka kwizikhundla zethu ezimfutshane ngelixa i-BTC kunye…
Februwari 22, 2022/by Forex Lens iindaba
Isenzo seXabiso sihlalutywe ngentsasa yanamhlanje eNew York…
Februwari 21, 2022/by Forex Lens iindaba
I-dollar ixabisa i-avareji- wonke umntu uthetha ngayo, kodwa kutheni…
Februwari 18, 2022/by Forex Lens iindaba
Yehlisa umngcipheko worhwebo okwangoku, ngenxa yokungaqiniseki kwiimarike.…
Februwari 17, 2022/by Forex Lens iindaba
Yintoni Kwisicwangciso Sakho
Siza kukufundisa ukuba ungakwenza njani
Thatha urhwebo lwakho ukuya kwinqanaba elilandelayo
Funda indlela yokuba ngumrhwebi onenzuzo ngakumbi namhlanje
Thatha izakhono zakho zokurhweba ukuya kwinqanaba elitsha. Jonga eyethu…
Aprili 2, 2021/ngu forexlens
Ukuba ulwandle olugudileyo aluzange lwenze umatiloshe onezakhono, intengiso egudileyo…
January 13, 2021/ngu forexlens
Ukuba ucinga Ukutsala oko kuKhokelwe kuko, ke sine…
Novemba 3, 2020/ngu forexlens
Njengoko u-Alan Watts omkhulu watshoyo:
Le yimfihlo yokwenene…
Oktobha 14, 2020/ngu forexlens
”Andikwazi ukukala Forex Lens phezulu ngokwaneleyo! Inkonzo eqaqambileyo, uhlala ukhona ukuba unemibuzo kwaye ufumana iingcebiso ngeengcali! Uhlalutyo olukhulu lweemarike! Ngokuqinisekileyo unolwazi ngakumbi emva koncedo kunye neengcebiso. Ngaba ungacebisa nabani na ofuna ukufumana ulwazi ngakumbi kwaye abe ngumrhwebi kwi-forex. ”(2021)
UJay H.Ilungu loMrhwebi wePro
”Enkosi kwiZiko loMrhwebi. Ungoyena mrhwebi ubalaseleyo endakhe ndadibana naye, kungekuphela ngenxa yobungcali bakho kodwa ngenxa yokuzinikela kwakho kubafundi bakho. ” (Ngo-2020)
UShirvan S.Ilungu loMrhwebi wePro
”Ndichithe amawaka eedola mhlawumbi, kunyaka ophelileyo ndifumana umboneleli ngenkonzo ye-forex elungileyo. Kumnandi ukuba neentlobo ngeentlobo zeeparile ukuba mhlawumbi andijongi ngexesha elinikiweyo, kwaye kuhle ngalo lonke ixesha, xa ndikworhwebo olufanayo nolunye lweempawu zorhwebo. Uhlobo lokuqinisekisa into endiyicingayo. ”(2017)
UJeff W.Ilungu loMrhwebi wePro
" Ukuthanda amava kunye nendlela ecace ngayo yonke into. Ukudityaniswa okuhle kwetalente kunye nokwabelana ngolwazi. Ulawulwa kakuhle. Njengomsebenzi. Qhubeka up guys! ”(2020)
UKaushal G.Ilungu loMrhwebi wePro
” Ixabisa yonke ipeni. Ndandimtsha kakhulu ekurhwebeni xa ndijoyina igumbi labo lokurhweba. Ndisebenzisa isicwangciso sexabiso lesenzo se-crypto kwaye sisebenza kakuhle. Ndincoma kakhulu Forex Lens kuye nabani na oqala nje ukurhweba. Kubonakala ngathi banazo izinto ezininzi eziphambili ngoku kunye nabarhwebi abaninzi abalungileyo kwimpikiswano elungileyo. Ndibeka impumelelo yam kubo! ”(2020)
UDoris B.Ilungu loMrhwebi wePro
Funda indlela yokuthengisa i-Forex ukusuka ku-A ukuya ku-Z
Imfundo yokurhweba ye-Forex
Uyisebenzisa kanjani imiqondiso ye-Forex ngeyona Ndlela eyiLungileyo
Matshi 18, 2020/nguOp Ed
Februwari 21, 2020/ngu forexlens
Ukufumana iBroker eyiNtloko yokuphumeza ii-Trades
Februwari 14, 2020/ngu forexlens
Ukufumana uMcebisi weNtengiso
Februwari 10, 2020/ngu forexlens
Ukwakha Isiseko sokuRhweba kwemini
Februwari 6, 2020/ngu forexlens
Ungena njani kurhwebo lweMini
Februwari 3, 2020/nguOp Ed
Uhlalutyo lobuGcisa kwiPokotho yakho
Sebenzisa amava abahlalutyi bethu bezobugcisa kunye nokukhawulezisa ukufunda kwakho. Sikubonisa indlela onokuthi uvelise ngayo umthombo ozinzileyo wemali ngokurhweba nge-Forex ngeendlela zethu zokurhweba kunye nolawulo lomngcipheko.
Gcina ixesha kwiitshathi!
Gcina iiyure ezingenakubalwa uhlalutya iitshathi zokuzingela ukurhweba okuhle. Sifumana izimvo zorhwebo ezinenzuzo yokuba uzihlalutye. Buyisela ixesha lakho. Inkululeko yezemali ilungile, kodwa inkululeko yexesha yiyo yonke into.
Iingcamango ezingakumbi zoRhwebo-kunye neNcinci!
Ukufikelela kungekuphela nje i-1, kodwa abahlalutyi bezobugcisa abaninzi abaneendlela ezahlukeneyo zokurhweba (ezifana ne-Smart Money) ukukunceda ngokurhweba kwakho - kwaye ngaphantsi kakhulu!
Bukela, funda kwaye uzuze kunye
Uhlalutyo olupheleleyo lweemarike, izimvo zorhwebo, kunye neeseshoni ze-Q & A-yonke imihla! Funda indlela yokuphuhlisa umda wokwenyani kurhwebo kunye neendlela esizifundisayo. Uya kuba ngumrhwebi oqeqeshwe ngakumbi kwaye ujikeleze kakuhle wakuba ngumrhwebi wePro!
Funda kwindawo engenabungozi
Qalisa ukuthengisa idemo kwindawo yokuthengisa engenabungozi ngelixa ufunda. Unako ukuphucula izakhono zakho zokurhweba ngaphandle kokukhathazeka ngokuphulukana nemali yokwenyani. Ukurhweba sisakhono esinokuhlawula ubomi bakho bonke.
Elona qela lenkxaso labathengi
Thetha neqela lethu nanini na Ingxoxo okanye usithumelele i-imeyile ngemibuzo yakho, ingxelo kunye nezinto ezixhalabisayo [imeyile ikhuselwe]. Sisoloko silapha ukunceda kuhambo lwakho lokurhweba.
Fumana isishwankathelo semihla ngemihla kwinto esiyibonayo kwimarike ye-Forex
Uhlalutyo lwesenzo sexabiso + i-EURUSD yi-Super Bearish
Ukuseta uRhwebo + IiNzuzo zoRhwebo olusempilweni
Ukuthatha iNzuzo + iiThagethi ezininzi eziPhambili ezifikelelweyo
Uhlaziyo lweMakethi ephilayo + i-NZDUSD kunye ne-AUDUSD yoThengisa iimeko
UNgeno oluLungileyo loRhwebo + i-BTC kunye ne-ETH izicwangciso zeXesha elifutshane lokuRhweba
Uhlaziyo lweBitcoin Analysis + EURGBP kwiNzuzo
I-Russia ihlasela i-Ukraine + i-USOIL ifikelela kwiThagethi yethu ephezulu
Ukuseta uRhwebo + Amathuba okuScalping
Inzuzo ye-Altcoin + Ukungena kakuhle kokuThengisa kwi-AUDUSD
Isenzo sexabiso + i-USOIL Setups ekwabelwana ngayo
I-Avareji yeendleko zeedola: Ukuthenga njani kwangethuba kwaye ugcine iiNgeniso zakho
Ukunciphisa uMngcipheko woRhwebo + i-BTC kunye ne-ETH Strategies